Email အရေးအသားကောင်းဖို့ အကြံပေးချက် ၇ ချက် - Myanmar Network
Email အရေးအသားကောင်းဖို့ အကြံပေးချက် ၇ ချက်
Posted by Soe Soe Win on March 4, 2015 at 10:39 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ခေတ်မှာ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေက တိုးတက်လာပြီဆိုတော့ ဆက်သွယ်ရေးမီဒီယံလို့ခေါ်တဲ့ ကြားခံဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွေကလည်း အမြောက်အများပါဘဲ။ မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ text တွေ voice mail တွေ ပို့တာမျိုး၊ Viber လိုမျိုး application တွေသုံးပြီး message တွေ video file တွေ ပို့တာမျိုး၊ Facebook နဲ့ ဆက်သွယ်ကြတာမျိုးတွေ အထိ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိတယ်။
အဲ့ဒါတွေထဲကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး၊ ရုံးသုံးစတာတွေ အတွက် တရားဝင်သုံးတာကတော့ email ပါဘဲ။ Email က လုပ်ငန်းသုံး ဖြစ်တာနဲ့အညီ Business English မှာ သီးခြားဘာသာတစ်ခု အနေနဲ့တောင် လေ့လာကြရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်သူမှန်သမျှ email ရေးနည်းကို သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Business English လေ့လာသူ ကျောင်းသားများပါ email ရေးနည်းကို လေ့ကျင့်မှုများများလုပ်သင့်ပါတယ်နော်။
ပုံမှန် အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာမိမိနဲ့ သိပြီးသူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် email ရေးကြတာမို့ informal ရင်းနှီးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရေးတာအသားကျနေပါပြီ။ ပြီးတော့လည်း စာလုံးပေါင်းနဲ့သဒ္ဒါ အမှားတွေ ပါရင်လည်းသိပ်ကိစ္စ မရှိဘူးမဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ မိမိရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေ၊ အရာရှိတွေ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဖောက်သည်တွေဆီရေးတဲ့အခါ ဒီအမှားတွေ အလွဲတွေ ကအကြီးအကျယ် ပြဿနာရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့အခါ good impression ဆိုတဲ့ မိမိအပေါ် အထင်အမြင် ကောင်းကောင်းရဖို့ လိုတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က သူတို့နဲ့ email အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီး သတိထားရပြီး ပိုပြီးတော့လည်း လိမ္မာပါးနပ် ရပါတယ်။
သင်ရေးတဲ့ email က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံ standard တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိသလား ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် အကြံပြုချက် ၇ ချက်ကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Subject Line (အကြောင်းအရာ/ ခေါင်းစဉ်)
မိမိရေးရမည့် အကြောင်းအရာကိုအတိုချုံးပြီး summary လုပ်ကာ subject line မှာထည့်ပါ။
Re: Summary of Our Meeting with ABC Suppliers
Subject line မပါတဲ့ email ဟာ မျက်နှာမပါတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာလိုဘဲမို့ အကြည့်ရ ဆိုးပါတယ်။ အလုပ်သဘောလည်း မဆန်ပါဘူး။
ဖတ်ရလွယ်ကူပြီး တိုတောင်းသော စာကြောင်းများကိုသာသုံးပါ။ ရှည်လျားတဲ့ စာကြောင်းတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖတ်ရခက်ပြီး နားလည်ဖို့လည်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ တွေးပြီး အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ရေးချရတာ ဖြစ်လို့ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကြောင်းရှည်လွန်းရင် ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ပျောက်ပြီး စာဖတ်သူကို မျက်စေ့လည်စေပါတယ်။ Email ရေးတော့မယ်ဆိုရင် KISS ကိုသတိရပါ။
KISS = Keep It Short and Simple. လိုရင်းတိုရှင်းပေါ့။
၃။ သင့် email ကိုဖတ်မည့်သူဘယ်သူဆိုတာစဉ်းစားပါ။
အခုရေးမှာက သင့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဆီကိုလား၊ စီးပွားဘက်ဆီလား၊ ဖောက်သည်ဆီလား၊ မိမိရဲ့ အရာရှိဆ်ီလား။ ပြီးတော့ ရေးရမဲ့ style က informal ခင်မင်တဲ့ ပုံစံလား၊ formal တည်တည်တံ့တံ့လား။ အခုခေတ် business email တော်တော်များများက သိပ်လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမျိုး မဟုတ်၊ သိပ်ကြီးလည်း တည်တည်တံ့တံ့ကြီး မဟုတ်ဘဲ အလယ်အလတ် neutral tone နဲ့ ရေးကြပါတယ်။ ကဲ..ဒါဆိုရင် informal နဲ့  formal တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေက်ိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
Informal - Thanks for the email of 15 February
Informal - Sorry, I can’t make it.
Formal တွေက ပိုပြီးယဉ်ကျေးပြီး ပါးနပ်မှု ရှိတာတွေ့ရတယ် မဟုတ်လား။
တစ်ချို့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေဆီကရေးတဲ့ email တွေကခင်မင်တဲ့ ပုံစံ formal ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သူတို့ဟာ သင့်မိတ်ဆွေတွေမို့လို့ ဆိုရင်ပေါ့။ အဲ့ဒီအခါမှာလည်း သိတဲ့သူတွေ အချင်းချင်းမို့လို့ သိပ်ပြီးလည်း ယဉ်ကျေးဖော်ရွေ နေစရာမလိုဘဲ စကားပြောထဲက စကားအချို့ကိုတောင် သုံးချင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- ‘Don’t forget’, ‘Catch you later’, ‘Cheers’
Grammar တွေ ဘာတွေမှားနေလည်း စာဖတ်သူက သိပ်ဂရုမစိုက်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စောစောက ပြောခဲ့သလိုကိုယ့် email ကို ဖတ်တဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဖောက်သည် ၊ အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အထက်အရာရှိဆိုရင် သဒ္ဒါ အမှားအယွင်းတွေ၊ ရင်းနှီးလွန်းတဲ့ ရေးဟန်တွေက လက်ခံလို့ မရဘူးနော်။
၄။ စာလုံးပေါင်း၊ စာလုံးအကြီးအသေး၊ အဖြတ်အတောက် သဒ္ဒါအမှား တွေသတိပြု
မိတ်ဆွေတွေဆီရေးတဲ့ email တွေမှာ အထက်ကဟာတွေက ခွင့်လွတ်လို့ ရပေမဲ့ business email မှာတော့ သင့်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ စာလုံးပေါင်း၊ စာလုံးအကြီးအသေး၊ အဖြတ်အတောက် သဒ္ဒါအမှားတွေ မပါအောင် အထပ်ထပ် အခါခါ ပြန်လှန်စစ်ဆေးရပါမယ်။ ရေးပြီးပြီးရော email ကို မလွှတ်လိုက်ပါနှင့်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကီးဘုတ်ကောက်ရိုက်ပြီး မောက်စ်တစ်ချက် ‘ကလစ်’လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ စာထွက်တာမို့ အမှားပါခဲ့ရင် ပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့ ဆိုတာသိပ်မလွယ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ပြန်စစ်ဆေးဖို့ ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပါလေ။
၅။ ခပ်ပြတ်ပြတ် ဒဲ့ပြောမလား၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောမလား။
တစ်ချို့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာက email ဆက်သွယ်ရေးမှာ တည့်တည့်ပြော၊ ဘွင်းဘွင်းရေးတာက common ဖြစ်တာရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မတူတဲ့ နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်ဘာသာစကား မသိတဲ့သူတွေဆီကို email ပို့တဲ့အခါ ပြဿနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ ပြတ်သားမှုကို ရိုင်းတယ်၊ စော်ကားတယ်လို့ သူတို့က မြင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
ဘွင်းဘွင်းပြော – ‘I need this in half an hour’.
သွယ်ဝိုက်ပြီးပြော – ‘Could I have this in half an hour?’
ဘွင်းဘွင်းပြော – ‘There will beadelay’.
သွယ်ဝိုက်ပြီးပြော – ‘I’m afraid there will beaslight delay’.
ဘွင်းဘွင်းပြော – ‘It’sabad idea’
သွယ်ဝိုက်ပြီးပြော – ‘To be honest, I’m not sure it would beagood idea’.
ဒါရိုက် ဘွင်းဘွင်းပြော တာကရိုင်းမနေဘူးလား။ သွယ်ဝိုက်ပြောတဲ့ tone တွေက ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ပြီး ပါးနပ်မှု ရှိတယ်နော်။ သင့်ရဲ့ လေသံကို လိုအပ်သလ်ို ပျော့ပြောင်းနူးညံ့ပေးပါက သင့် စာဖတ်သူတွေဆီကလည်း အကောင်းမြင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြန်ရတတ်ပါတယ်။
အောက်ပါ စကားလုံးတွေကို ကြည့်ပါ။
Helpful - အကျိုးရှိတယ်
good question- မေးခွန်းကောင်းဘဲ
agreed - သဘောတူတယ်,
together - အတူတူ
useful - အသုံးဝင်တယ်
I’d be delighted - ဝမ်းမြောက်ပါတယ်
mutual - နှစ်ဦးနှစ်ဖက်
opportunity - အခွင့်အလမ်း
ပြီးတော့ ဒီ အဆိုးမြင်စကားလုံးတွေကို ကြည့်ပါ။
Busy - အလုပ်ရှုပ်နေတယ်
Crisis - ပြဿနာဘဲ
Failure - ကျရှုံးပြီ
forget it - တော်ပါပြီ
I can’t - မရဘူး
it’s impossible - မဖြစ်နိုင်ဘူး
waste - အလကားဘဲ
hard - ခက်တယ်
စကားလုံးတွေက စိတ်နေသဘောထား attitude ကိုဖော်ပြတယ်။ ဒါကြောင့် အမြော်အမြင် ရှိရှိနဲ့ စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပါလေ။
တစ်ကယ်လက်တွေ့ နယ်ပယ်မှာ email ရေးတဲ့အခါ လိုအပ်ရင် မိမိ email ကို အခြားသူတစ်ဦးဦး အား ဖတ်ခိုင်းပြီးသူရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းပါ။ အဲ့ဒီသူက မိမိရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ၊ မိမိထက် အင်္ဂလိပ်စာ ပိုကောင်းတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆီကိုလာတဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ email တွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ မှတ်သားစရာများကိုလည်း လေ့လာပြီး ကိုယ်ပိုင် phrase book မှတ်စုတစ်ခု ပြုစုထားပါ။ email ရေးနည်း နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ရှာဖွေလေ့လာပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင်အောင်မြင်ပါပြီ။
Englishwithatwist.com မှ Shanthi ရဲ့7tips on how to improve your email writing skills ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာ (http://englishwithatwist.com/2013/10/28/7-tips-on-how-to-improve-yo...) တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ စာပို့တဲ့အခါ သတိပြုဖွယ်အချက်များ (B sure2send rite msg o...
Permalink Reply by Aung Win Naing on March 4, 2015 at 21:21
Permalink Reply by Htike Zawwin on March 5, 2015 at 9:22
Permalink Reply by Wah Ko on March 5, 2015 at 11:39
Permalink Reply by eipapalay on March 5, 2015 at 12:27
Thank. Helpful for all.
Permalink Reply by Zin Mar Aye on March 11, 2015 at 15:28
Permalink Reply by Kyaw Htet Naing on March 14, 2015 at 8:41
It is very valuable to me.Special thanks!
Permalink Reply by ZAR YEE MON on March 21, 2015 at 6:23
Permalink Reply by Yee Yee Toe on October 8, 2015 at 15:34
Permalink Reply by Nay Myothu on October 9, 2015 at 10:15
Permalink Reply by Htun Htun on February 21, 2016 at 15:39
Permalink Reply by MS AYE AYE THWE on March 30, 2016 at 16:46
Thanks in millions !!!!
Permalink Reply by Soe Min on March 30, 2016 at 21:10